AO RAHA Gazety Malagasy Online – FANATANJAHANTENA	Ny gazety Ao RahaTahiry
FANATANJAHANTENA	Miverena Tenisy « Coupe Davis » – Nijanona ho Vondrona III i Madagasikara(0)Tsy tafavoaka teo anatrehan’i Maraoka, teo amin’ ny dingan’ny manasa-dalana, ho an’ny Coupe Davis, faritra Afrika, ny ekipam-pirenena malagasy, ny sabotsy lasa teo, tany Ejypta. Niondrika tamin’ny alalan’ny isa 2 no ho 1 isika teo anatrehan’ity lohalaharan’ny vondrona A ity, izay nitazona antsika tsy hiala ao amin’ny vondrona III, amin’ny taona ho avy.
Tamin’ny alalan’ny seta 2 no ho 0 (6/2, 7/5) no nampiondrika an’i Jean Jacques Rakotohasy, izay nisedra ny faharesena voalohany ho azy, teo amin’ity lalao ity, teo amin’ny lalao voalohany ho an’io dingan’ny manasa-dalana io.
Resy tahaka izany ihany koa isika teo amin’ny olon-droa miaraka, izay niarahan’i Tony Rajaobelina sy Antso Rakotondramanga. Ity farany no mba nahita fandresena ho antsika teo amin’ny lalaon’olon-tokana faharoa. “Tena efa niady isika saingy angamba mbola misy ny tsy ampy kely ka heveriko fa tsy maintsy harenina amin’ny taona ho avy”, hoy i Ando Rasolomalala, mpilalao malagasy avy teto Madagasikara niatrika fanindroany ny Coupe Davis.
Azo heverina fa fisafidianana mpilalao no isan’ny tena nahatonga ny faharesena ho an’ireo solontena malagasy tamin’ity fifaninanana ity. Teo ihany koa anefa ny mety harerahana noho ny lalao intelo nifanesy notontosain’izy ireo, araka ny tombatomban’ ny avy eo anivon’ny federasiona malagasin’ny tenisy.
Tamin’ireo lalao efatra nataony, tsy mbola nisy naharesy ny ekipan’ny Taxi Tsimbazaza, mandray anjara amin’ilay “Grand tournoi taxi-foot”, atao isaky ny sabotsy, eny amin’ny kianjam-pasika, eny Fort Duchesne, izay kitra lalaovin’olona fito. Omby no loka amin’ity fifaninanana ity.
Baolina kitra Analamanga – Voatanan’ny Cosfa ady sahala ny Masindahy Misely(0)Nitarika ny fidinan’ny AS Saint Michel Elgeco ho eo amin’ny laharana faharoa ny ady sahala samy tsy nitoko nisarahan’izy ireo tamin’ny Cosfa, ny sabotsy lasa teo, teny amin’ny kianjan’i Carion. Tsy afa-nanohitra ny sakana napetraky ny miaramila tamin’io fihaonana nanamarika ny andro faha-13 ho an’ny fiadiana ny ho tompondakan’Analamanga io ny ekipan’ny Masindahy Misely avy eny Amparibe.
Handball – Nanjakan’ny avy any Atsimo ny “Open Junior 2013”(0)Tsy namelan’ireo avy any amin’ny faritra atsimo raha tsy azony ny amboara niadiana teo amin’ny “open junior”, ho an’ny handball notontosaina, tamin’iny herinandro iny. Ny HBCI avy any Ihorombe no voahosotra ho tompondaka teo amin’ ny vehivavy raha nandresy ny ekipan’Atsinanana, izay isan’ireo taninketsan’ ny handball eto Mada- gasikara, tamin’ny alalan’ ny isa 48 no ho 46. Efa tany amin’ny fanalavam-potoana anefa vao nahita an’io fandresena io ireto avy any Ihosy ireto rehefa nisaraka tamin’ny isa nitovy samy 40 teo amin’ny fe-potoana ara-dalana. Nitarika tamin’ ny alalan’ny isa 18 no ho 17 anefa ny solontenan’
i Toamasina teo am-pialan-tsasatra.
Tsy nahatsiaro ho sahirana kosa ny ekipan’ Atsimo Andrefana nanoloana ny ASSM avy etsy Amparibe, teo amin’ ny lalao famaranana ho an’ny sokajy lehilahy. Nomontsanin’izy ireo tamin’ny alalan’ny isa 32 no ho 20 ity ekipan’ny Masindahy Misely ity, teo amin’ny fe-potoana farany ho an’io lalao io. Nitarika hatrany am-piandohana ny avy any Toliara tamin’izany lalao izany ary lavitra, 16 no ho 9, ny elanelana teo amin’ny fe-potoana nialana sasatra. Natao indrindra hifantenana ireo mpilalao handrafitra ny ekipam-pirenena hiatrika ny fiadiana ny amboaran’i Afrika eo amin’ny sokajy vehivavy, izay atao any RD Congo, tsy ho ela iny fifaninanana iny. Noentina ihany koa anefa nanaitra ny hafanam-pon’ireo mpilalao lehilahy tanora, araka ny nambaran’ny federasiona.
Moto cross – Tompondakan’i Madagasikara vonjimaika I Ted Boyaval(0)Nisongadina teo amin’ ny andiany fahatelo, amin’ ny fiadiana izay ho tompon- dakan’i Madagasikara eo amin’ny fanamoriana moto cross i Tod Boyaval, natao tany Nosy-Be Hell-ville. Isan’ny mpifaninana akaiky aminy i Claudio Tida, izay niala an-daharana teo amin’ny dingana faharoa, raha vaky kodiarana.
Tamin’ny fifaninanana andiany voalohany, izay natao tany Toamasina no nitarika i Tida Claudio. Norombahin’ny Ted kosa ny andiany faharoa teny Iavoloha, ary dia mbola nohamafisiny izany tamin’ity andiany fahatelo tany Nosy-Be ity. Izy izany aloha hatreto no tompondaka vonjimaika eo amin’ny fifaninanana fanamoriana moto cross.
Basket ball N1B – Voahosotra ho tompondaka ny Fitsarana any Toliara(0)Norombahin’ny JBC, ekipan’ny Fitsarana ao amin’ ny renivohitry ny Faritra Atsimo Andrefana, ny anaram- boninahitra tompondakan’ i Madagasikara, teo amin’ ny basket ball sokajy N1B, izay nampiantranoan’ izy ireo tamin’iny herinandro iny.
Tenisy « Coupe Davis » – Hifandona amin’ ny 1/2-dalana i Maraoka sy Madagasikara Azon-dry Jean Jacques Rakotohasy sy ny namany, izay misolo tena antsika any Egypta amin’ny fifaninanana tenisy na ny “Coupe Davis” Vondrona III, ny laharana voalohany niarahana tamin’i Namibia ary Rwanda tao amin’ny Vondrona C. I Maraoka no hifandona amin’ny ekipa Malagasy amin’ny manasa-dalana, taorian’ ny nandresen’i Mada- gasikara isa 3 no ho 0 ny Namibiana, omaly.
Teo amin’ny lalao voalohany, resin’i Jean Jacques Rakotohasy na i Zakakely tamin’ny seta 2 no ho 0 (6/3, 6/0) i Jacobus Serdyn. Seta 2 no ho 0 (7/6, 6/3) ihany koa no nandavoan’i Antso Rakotondramanga an’i Tiku Jacob. Mbola seta 2 no ho 0 (6/1; 6/1) ihany koa no nandresen’i Ando Rasolomalala sy Tony Rajaobelina azy mirahalahy ireo teo amin’ ny olon-droa miaraka.
Raha tafavoaka eo anatrehan’i Maraoka isika dia tafaverina indray ao anatin’ny vondrona II amin’ny taona 2014, ka hiarahantsika amin’ireo firenena eoropeana.
Rugby « Grand defi Berthin » – Ekipa valo hifampihantsy eny Antanikatsaka Mandritra ny alatsinainin’ny Pantekosta dia hifampihantsy eny amin’ny kianjan’Antanikatsaka ireo ekipa valo avy eny amin’ny seksiona Atsimondrano, eo amin’ny taranja rugby, izay efa niatrika ny “tournoi Berthin Atsimondrano”. “Fangatahan’ireo ekipa ireo ny hifanala vela ka antony nahasarika anay hanohana azy ireo. Fanao rahateo izany lalao fihantsiana izany ho an’ny rugby. Tsy ady omby fa fitaovana hoentina manao fanatanjahantena no hatolotra ho an’izay mandresy”, hoy i Berthin Randriamihaingo, filohan’ny “Team Berthin”.